STOP Depression | yathar Magazine
အောကျတိုဘာ 22, 2019
Depression ဝေဒနာ လက္ခာများ အတွက် သက်သာစေသော အစားအသောက် အနေအထိုင်အမူအကျင့်များ
၁။ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ လတ်ဆက်သော သစ်သီးများ။
၂။ ဆေးသကြားပါသော အစားအစာများ၊ သဘာဝမဟုတ်သော အစားအစာ၊အချိူရည်များ နှင့် caffeine ဓါတ်များပါဝင်သောအစားအစာများကို စားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၃။ အသားဓါတ် အသင့်အတင့်နှင့် Omega3fatty acid များကို စားသုံးပေးပါ။
၄။ vitamins နှင့် သတ္တုဓါတ်တွေဟာလဲ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ. အစာအဟာရတွေပါ။ စားသုံးပေးပါ။
၅။ Dark Chocolate
အခုနောက်ပိုင်း dark chocolate တွေကို အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဆေးတစ်မျိုး အနေနဲ့ ကို အသုံးပြုလာပါတယ်။ အဓိက ကတော့ dark chocolate မှာ ပါတဲ့ Anandamide လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်း ထုတ်တာ ကို အားပေးတဲ့ အတွက် စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း တွေ ကို သက်သာစေပါတယ်။
၁။ ဘ၀ကို အကောင်းဘက်က များများတွေးပေးပါ။ များများ မြင်ပေးပါ။
၂။ တခုခုအပေါ်မှာ သင်ရှု.မြင်တဲ. ကြည်.တဲ.နည်းလမ်းကို ထိန်းချူပ်ပေးပါ။
၃။ သင်ကြိုက်တဲ. အရာတွေကို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်အချိန်တွေကို အသုံးချပေးပါ။
၄။ သင့်ကျန်းမာရေးကို အမြဲ ဂရုစိုက်ပေးပါ။
၅။ သင့်ရဲ. အတွေးခံစားချက်တွေကို ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပေးပါ။
၆။ စိတ်ဖိစီးမှူ တခုခု ခံစားနေရလျှင် နှစ်သိမ်.ပညာပေးရန်အတွက် တတ်ကျွမ်းသူများထံ တိုင်ပင်ပါ။
Drepession ဝဒေနာ လက်ခာမြား အတှကျ သကျသာစသေော အစားအသောကျ အနအေထိုငျအမူအကငျြ့မြား
၁။ သဈသီးဖြျောရညျမြား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား၊ လတျဆကျသော သဈသီးမြား။
၂။ ဆေးသကွားပါသော အစားအစာမြား၊ သဘာဝမဟုတျသော အစားအစာ၊အခြိူရညျမြား နှငျ့ caffeine ဓါတျမြားပါဝငျသောအစားအစာမြားကို စားသုံးခွငျးမှ ရှောငျကွဉျပါ။
၃။ အသားဓါတျ အသငျ့အတငျ့နှငျ့ Omega3fatty acid မြားကို စားသုံးပေးပါ။
၄။ vitamins နှငျ့ သတ်တုဓါတျတှဟောလဲ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ. အစာအဟာရတှပေါ။ စားသုံးပေးပါ။
၁။ ဘဝကို အကောငျးဘကျက မြားမြားတှေးပေးပါ။ မြားမြား မွငျပေးပါ။
၂။ တခုခုအပျေါမှာ သငျရှု.မွငျတဲ. ကွညျ.တဲ.နညျးလမျးကို ထိနျးခြူပျပေးပါ။
၃။ သငျကွိုကျတဲ. အရာတှကေို လုပျခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့အခြိနျတှကေို အသုံးခပြေးပါ။
၄။ သငျ့ကနျြးမာရေးကို အမွဲ ဂရုစိုကျပေးပါ။
၅။ သငျ့ရဲ. အတှေးခံစားခကျြတှကေို ရငျးနှီးသောမိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှကေို မြှဝပေေးပါ။
၆။ စိတျဖိစီးမှူ တခုခု ခံစားနရေလြှငျ နှဈသိမျ.ပညာပေးရနျအတှကျ တတျကြှမျးသူမြားထံ တိုငျပငျပါ။
Yathar applicationdownload link(https://s.yathar.com/apps)
Download Now – https://s.yathar.com/apps
Booking လုပ်နည်း – https://youtu.be/y9Qirlq-6D4?list=PLFWJXDOqROChyclf2UDpC5xnbL1H5569o
Discount Coupon အသုံးပြုနည်း – https://youtu.be/hWifk6dF2qw?list=PLFWJXDOqROChyclf2UDpC5xnbL1H5569o
သင်သိပါသလား ? ဆေးပေါင်း ဘယ် လို ခ သလဲ? ဘယ် အချိန် ခ သလဲ? ဘာ ကြောင့် ခ သလဲ?